Miyuu Paul Pogba Albaabada u furay inuu u ciyaaro Kooxda reer France ee Paris Saint-Germain? – Gool FM
(Paris) 01 Juun 2020. Sida wararku ay sheegayaan ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda kubadda cagta Manchester United ee Paul Pogba ayaa la soo warinayaa inuu Albaabada u furay inuu u dhaqaaqo naadiga PSG.
Maadaama uu Pogba Albaabada u furay inuu u Paris Saint-Germain, waxa uu dib ugu laaban karaa laacibkan reer France dalkiisa hooyo.
Kooxda Paris Saint-Germain ayaa waxaa soo baxday inay macquul tahay inay la soo wareegaan xiddiga Naadiga Manchester United ee Paul Pogba.
Warsidaha Le 10 Sport ayaa sheegeysa in PSG ay kula biirtay kooxaha Juventus iyo Real Madrid tartanka loogu jiro saxiixa Pogba, iyagoo muujinaya xiisaha ay u qabaan ciyaaryahankan khadka dhexe.
Inkastoo Pogba uu door-bidaayo u dhaqaaqista dalka Spain, haddana ninka reer France ayaa lagu soo warramayaa inuu u furan yahay fikirka ah inuu ka ciyaaro Magaalada Paris ee Caasimadda u ah dalkiisa Faransiiska.